Juventus oo ka hadashay abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST uu dhawaan ku guuleystay Lionel Messi – Gool FM
Juventus oo ka hadashay abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST uu dhawaan ku guuleystay Lionel Messi
Dajiye September 25, 2019
(Turino) 25 Sebt 2019. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu u qalmay ku guuleysiga abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST in ka badan laacibka reer Argentina Lionel Messi ee kooxda Barcelona.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa habeenkii Isniinta ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST, waxaana uu ku guddoomay magaalada Milan oo abaal-marinnada FIFA lagu bixiyay, isagoo ku garaacay xiddigaha Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ayaa la xaqiijiyay inuu ka maqnaanayo dhacdada xafladii FIFA ee ka dhacday magaalada Milan ee dalka Talyaaniga, wuxuuna u muuqday inuu si hordhac ah kaga war qabay guuleystaha abaal-marintan, sidaas darteed wuxuu go’aansaday inuusan ka qeyb galin.
Haddaba Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici ayaa aaminsan in Cristiano Ronaldo uu u qalmay ku guuleysiga abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST, sababa la xiriira inuu ku soo guuleystay tartamada horyaalka Serie A, Italian Super Cup iyo UEFA Nations League.
Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici ayaa u sheegay wargeyska Corriere dello Sport:
“Aad ayaan uga xunahay wixii ka dhacay xafladii FIFA ee abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST”.
“Aniga oo ixtiraamaya Lionel Messi, waa laacib aad u weyn ee fiican, laakiin waxaan u maleyneynaa in Ronaldo uu u qalmay in loo caleemo saaro abaal-marintan, kaddib xilli ciyaareedkiisii cajiibka ahaa ee uu u soo bandhigay, isagoo ku soo guuleystay horyaalka Serie A, Italian Super Cup, UEFA Nations League iyo inuu ciyaaray kulamo cajiib ah tartanka Champions League”.
Goolhayaha Kooxda Liverpool ee Alisson Becker oo ka hadlay halka uu marayo ka soo kabashada dhaawaciisa
Zidane oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Osasuna & magacyada xiddigo badan oo liiskan ka maqan